प्रमकाे स्वास्थ्य सामान्य, बुधबार उपचार पूरा हुने
काठमाडौँ, भदौ १६ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ प्रक्रियाबाट मिर्गौलामा देखिएको ‘एन्टिबडी’ निराकरणको उपचार भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा.कुन्दन अर्यालले मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडी उपचार जारी रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको भन्दै ट्वीट गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार, सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीको छैठौं चरणको प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रिया सोमबार हुने छ ।
बुधबार सातौं चरणको प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै उपचार पूरा हुने छ । उहाँले ट्वीट गर्नुभएको छ, “प्रमसँगै रहनुभएका उहाँका निजी चिकित्सक डा. दिलिप शर्माका अनुसार बुधबार सातौं चरणको प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै उपचार पूरा हुनेछ । प्रमको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।” प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य उपचार तथा थप परीक्षणका लागि भदौ ५ गते सिंगापुर जानुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अपडेट : सामान्य हिँडडुल गर्न थाले
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। बुधबार त्रवि शिक्षण अस्पतालमा दोस्रो पटक मृर्गौला प्रत्यारोपन गरेर उपचारका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार आइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पताले शुक्रबार अपरान्ह जारी गरेको स्वास्थ्य बुलेटिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्...
प्रधानमन्त्री ओली खतरामुक्त,केही दिनमै डिस्चार्ज
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा...
प्रधानमन्त्रीले अस्पतालबाट भने : चाँडै काममा फर्किन्छु
काठमाडौं : ग्राण्डी अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू चाँडै काममा फर्किने बताएका छन्। मिर्गौलामा गम्भीर समस्या देखिएपछि उपचारका लागि बुधबार बिहान धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालको आईसीयूमा राखिएका प्रम ओलीले प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालसँग छोटो कुराकानी गर्दै आफू काममा फर्किन आतुर रहेको बताएका हुन्।&...
प्रधानमन्त्री ओली आज स्वदेश फर्किंदै :: Pahilopost.com
काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिङ्गापुरबाट उपचार गरी शुक्रबार स्वदेश फर्कंदैछन्। प्रेस सल्लाहाकार डा कुन्दन अर्यालले सिङ्गापुरबाट थाइल्याण्ड हुँदै अपराह्न थाई एयरवेजबाट प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्कने जानकारी दिए। मिर्गौलासम्बन्धी एण्टिबडीको उपचारका लागि उनी भदौ ५ गते त्यसतर्फ गएका थिए। उनको सिङ्गापुरस्थित नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार भएको थियो। उपचारकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले
प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार प्रक्रिया बुधवार सकिने :: Pahilopost.com
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचार प्रक्रिया बुधवार सकिने भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले निजी चिकित्सक डा दिलिप शर्मालाई उद्दृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको उपचार प्रक्रिया बुधवार सकिने जानकारी दिएका हुन्। उनले आइतवार ट्वीट गर्दै प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रियाबाट मृगौला सम्बन्धी एन्टीबडीलाई निवारण गर्नेगरी उपचार जारी रहेको जानकारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ विधिबाट उपचार सुरु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ विधिबाट गत शुक्रबारबाट उपचार सुरु भएको छ । उपचारका लागि बिहिबार सिंगापुर जानु भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले ट्वीटर मार्फत् जानकारी दिनुभएको छ ।
गोरखापत्र श्रावण २०७६
कस्तो छ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था? सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा उपचार सुरु :: Pahilopost.com
प्रधानमन्त्रीमा एन्टीबडीको मात्रा बढी देखिएको छः निजी चिकित्सक शर्मा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी चिकित्सक डा. दलिप शर्माले मिर्गौला सम्बन्धी एन्टीबडीको मात्रा केही बढी देखिएकाले थप उपचारका लागि प्रधानमन्त्री सिंगापुर जानुपरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफूहरुकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर गएको स्पष्ट पारे । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा डा. शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बाहिर हल्ला भएजस्तो र टिकाटिप्पणी भएजस्तो यथार्थ नभएको जिकिर गरे ।
कारोबार दैनिक श्रावण २०७६
प्रधानमन्त्रीलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना
५ भदौ, काठमाडौं । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मृगौलासम्बन्धी एन्टीबडीको मात्रा घटाउनका लागि विहीबार सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । सिंगापुरस्थित न्यासनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा करिब डेढ हप्ता उपचार गरेपछि नेपाल र्फकने प्रधानमन्त्रीको कार्यसूची …
अनलाइनखबर श्रावण २०७६